Umhla My Pet » Leslie ka-Top Ten Dos ezenziwayo Summer Doggie BELIYO
ngokuthi Leslie intambo
ukubuyekezwa: Jul. 03 2020 | 3 min ukufunda
ukuziphatha dog kakuhle kubalulekile unyaka wonke, kodwa iba kakhulu kwimozulu eshushu xa izinja off leashes zabo kunye nabantu, njengesiqhelo, ungaphangelanga reda zabo. CANINES nabantu sichazelane nengca xa, unxweme, Frisbees pikniki, indalo zingqubane. Ndiya ukukhwaza xa ndibona omnye ngaphezulu Rottweiler kuvunyelwa kukuhambahamba ngeenxa unfettered kuba ngumhla ilanga. Kwaye ndiyayithanda izinja. Yinto ngabaninizo uzenze bajongelwe. Ngoko ke, abanini, apha imithetho yam efowunini ihlobo kuba izinja kunye am.
1. MUSA ke inja yakho uchamayo kwi hydrangeas ummelwane wakho. ummelwane wakho uye uchithe ixesha elininzi neenzame ukwenza entlahleni lakhe egadini nenja umchamo ayikho kuthetha oko xa wathi iintyatyambo ezifunekayo sinkcenkceshele namhlanje.
2. MUSA ke inja poop yakho engceni epakini. (Ngaba kufuneka ukuba bathi bonke inja poop kufuneka usoloko ufumana uyichole, ngaphandle kokuba bahlala adakasa of Alaska? Njengoko baseMerika usenza inkululeko ukuba inja poop umgquba yakho kwiyadi, kodwa ke, Andifuni ukuba andinazi nina.) Ngexesha lasehlotyeni, iiloni park zisetyenziselwa pi, ukudlala ibhola, kunye jikelele lolling malunga. Into yokugqibela umntu ofuna ukufumana angazenza emva lolling ngosuku elinengca ezinye unidentifiable, okanye ngenye into ethile achongeka kakhulu kwaye onukayo.
3. MUSA ke inja yakho drool enye inja okanye Pumas ezintsha umhlobo wakho. Akukho nto intle kwaye oko ezilizothe. (Nakuba umntu angatsho nokuthi $100 izihlangu intenetya fanelwe drool kancinane) kwaye ngaphandle, uluchwe kudla ngokuthetha ukuba baxi- lunxano, ngoko qiniseka inja yakho ifumana amanzi ngokwaneleyo. Mhlawumbi nje omnye kwabo izinja ngubani nxilayo kakhulu. Bakwathi ngumsebenzi wenu ukosula drool kude ngaphambi kokuba u nethuba singaliva indawo Bichon.
4. Mawuze inja wakho uyakuthanda kuqubha entyumpantyumpeka, kodwa kuphela xa sele kukho ukubukela ukhuseleko yakhe, echibini okukokwenu, ukuba sicoce lunwele lwakhe kwaye musa ukuvumela ukuba bathathe inxaxheba inkuku ekulweni ingakumbi xa Umelwe emagxeni akhe.
5. NGABA uthathe inja yakho elunxwemeni kodwa ungavumeli poop bakhe uze aliselele isanti. MUSA ke ekuhambeni kwakhe phezu sanitary ngokuthumela nentlabathi ubuso. MUSA makhe qubha bakhe uze niluvuthulule yazibopha kufuphi sunbathers. NGABA uthathe inja yakho neemitha ezilikhulu phantsi elunxwemeni kwaye makhe wamaza ukuba umxholo iintliziyo zakhe.
6. MUSA ke inja qubha yakho kwichibi wena akazazi. Oku ukuyithwala iintsholongwane okanye isifo. Singasathethi geyitha efana naleyo kwafunyanwa kutsha Central Park yakhe Harlem Meer, litshatshazi ethandwayo inja ehlamba. Ngoko ngaphambi kokuba ke inja qubha yakho kwi Pond ezingaziwayo, oqubha kuqala khona ukuze uqiniseke ukuba ilungile.
7. NGABA ahambe inja kodwa musa ukucinga ukuba ngenxa yokuba nje ehotele ivumela izinja, ukuba wonke kwihotele ngumntu inja. Inyaniso, sicinge mntu ngumntu inja, kwaye makavunyelwe umva. Zama ukugcina kukukhonkotha ukuba ubuncinane (inja yakho kakhulu), mayihlale inja yakho ngomnxeba, ukuhamba naye rhoqo kwaye othulula ngesisa.
8. NGABA uthathe inja yakho ngokuxhoma kodwa nenja yakho kunirhintyela; ngoko ke akukho yokulahleka kwaye akufuneki atripe umhambi amanye. Yinto uhlobo ende ukusuka encotsheni Yosemite Falls.
9. MUSA nezinja yakho ichibi iqela okanye ibrayi engacelanga umkhosi kuqala. Nje ngoba ehlotyeni kwaye kubonakala kuthetha ukushiya ikhaya lakhe ngosuku entle, MUSA nezinja bakho kunye nawe naphi na apho uya khona. Awukwazi ndamshiya imoto (kuba indlela kushushu kakhulu), kwaye awukwazi ukuyishiya ecaleni ebotshelelwe epalini (ikhitshi, bedanduluka luyemka uxolo, singasathethi pookie yakho nako ukuze ezibiweyo). Shiya inja yakho ekhaya ukuba ayikho kwindawo efanelekileyo izinja. Yena uya kuba nesithukuthezi. Uza kuba nombulelo. Uya kuba wenze intetho encinci.
10. MUSA kucheba iinwele inja yakho kuba ucinga ukuba kushushu kakhulu. Loo nto ibizwa ngokuba anthropormorphizing, leyo uhlobo oluthile Doggie sentuthumbo oluquka kodwa kungaphelelanga ekwenzeni kwakhe ukunxiba needyasi kunye ngamaxhoba. iinwele Inja xa ugcina aphole ngeemini ezishushu efudumeleyo abo cool. (Ukuba awuyazi le, nceda uye ngokukhawuleza kwi kwivenkile ekufutshane uze ube ncwadi dog inkathalo, kunye incwadi yam entsha, The Dog Walker
Five Questions Daters umxokozelo udinwe zeTyala
Indlela Ukutsalela Nomfazi zamaphupha zakho
6 Kubalulekile Izinto Amadoda Cinga Malunga Xa Usabelana Ngesondo